Sidee iskaga ilaalin kartaa tuugada ka shaqeesata online ka. – Fatuux Tech
Sidee iskaga ilaalin kartaa tuugada ka shaqeesata online ka.
Fatuux Cade	Hacking News, Tech News	 December 18, 2018 2 Minutes
10 Talaabo aad iskaga ilaalin karto tuugada online ka.
Sidaan wada ognahay waxaa soo badanaya maalin maalinta ka danbeysa dhicida dadka oo laga xadayo Data dooda iyo arimahooda shaqsiyadeed. Haddaba sidaad iskaga ilaaliso tuugadaas waxaad u baahan tahay inaad sameyso 10 kaan talaabo.
Isticmaal number sireed adag: number sireed kaaga waa inuusan ka koobnaanin waxyaabo adiga laguugu tuhmi karo sida; maalinta aad dhalatay, numberkaaga mobile ka, magacaaga iyo qoyska magacooda. Intaas waxey sahleysaa in la qiyaaso number sireed kaaga. Waa inuu ka koobnaada ugu yaraan 8 xaraf iskugu jira Far waaweyn, Far yar yar, number iyo calaamado.
Iska ilaali link yada asxaabtaada kuu soo dirayaan ama qofaadan aqoonin. Links ka waxaa lagu tiriyaa wadada ugu fudud uu isticmaali karo tuuga. Iska ilaali inaad gasho Link yadaas sababtoo ah waxey qaadi karaan warbixin adiga ku quseesa sida; magacaaga, computer kaaga waxa ku jira iyo laga yaabe number sireed kaaga in lagaa ogaado.
Iska ilaali inaad ku dhufato xayeysiimaha aad ku aragto Internet ka. xayeysiimaha ama sida loo yaqaano Ads ka waxey ku jiraan qaabab ka laguu lumin karo lagaana heli karo macluumaad kuugu saabsan. Tuugada inta badan waxey usoo bandhigaan qofkasta waxyaabaha uu daneeyo inuu ka raadiyo internet ka ama warar halis ah, kaliya intaas waxey u sameenayaa iney kusoo jiitan.
Iska ilaali inaad gasho website yo aadan aqoonin ama aad ka shakisay. Arintaan qaas ahaan waxey daran tahay markaad ka ganacsaneyso internet ka. website ka ka fiiri magaciisa kore inuu yahay https:// ka hor inta aadan lacagta bixinta. Badanaa tuugada waxey isticmaalaan http:// kaliya.
Markasta lasoco cusbooneysiinta shirkadda system kaaga OS: Waa muhim inaad system kaaga computer ka ama taleefanka aad cusbooneysiiso (update) sida ugu dhaqsiyaha badan. Asbaabaha badanaa ee shirkaddaha usoo diraan cusbooneysiin waxaa ka mid ah iney xaliyaan cillado ay ogaaden in lagu dhici karo system kooda.
Flash yada iyo CD yada: Iska ilaali inaad galiso computer kaaga ama taleefan kaaga flash aadan hubin ama aad ka shakisan tahay ruuxa leh. Flash yada iyo CD yada waxaa lagu sameyn karaa Virus yo dhici kara waxyaabaha ku jira system kaaga noocu doono ha ahaade.
Ka foojig toonow soo dajinta Applicationada iyo software yada. Siyaabaha uu tuuga wax ku dhaco waxaa kamid ah inuu sameeyo application mobile ama software computer uu ku dhax sameeyo virus gudahiisa.
Haku xirin computer kaaga ama taleefankaga wifi public ah: Hadaad sameyso aad ku xirto tuuga waxaa u fududaanayo inuu soo galo system kaaga computerka ama taleefanka kadibna uu ka sameysto siduu doono.
Isticmaal markasta Anti-virus: Isticmaalka Anti-virus ka waxuu yareenayaa halista dhicida. ma jiro ruux ku dhihi karo 100% waa aamin sheygaan isticmaalkiisa balse tuuga ayee ku adkaaneysaa inuu baaso Anti-viruska.
Ha aaminin waxkastoo internet ka yaala: Waxaa laga yaabaa inuu tuug soo dhigo waxyaabo aanan jirin oo fake ah kadibna uu ku dhaho si aad u gadato sheygaan gali halkaan account number kaaga kadibna uu lacagta kaala baxo account kaaga sidaasna.
Qoraa: Eng Fatuux.
Previous Post U guurida dhanka teknooloojiyadda.
Next Post Qiimaha iyo tilmaamaha uu wato mobile ka Galaxy S10:
2 thoughts on “Sidee iskaga ilaalin kartaa tuugada ka shaqeesata online ka.”
Asc wall bacda salaan waxaan jeclahay inaan Ku waydiiyo half su aal
Sideen ugu dhiga kara page Facebook mid caan, sideen u mari karaa ahuruudaha liiga rabo, markastabwuxuu I waydiiya promote mana fahmaayo? adigoo mahadsan jawabta igu soo dir emailkaan mahadsanid
Fatuux Cade says:
Wcs walaal. ka raali noqo soo daahida jawaabta marka hore. Walaal promote marka hore waa inaan fahamno, oo ka wado maxuu yahay?!
Waa inaad cinwaankaaga aad shaaciso dadyow bandanna ay arkaan ama ay kusoo raacaan. Sideen marka xigta u promote gareen karaa?!
Waa inaad marka hore heysato Master Card ama Visa Card, kadib waxaad ku dhufaneysaa “promote my account” magaca, card number ka, iyo waxyaabo badan ayuu ku weydiin doonaa instruction ka kaliya raac.